တရုတ်ဇနီးမယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရမယ့် မိန်းကလေးငယ် ၇ ယောက်ကို တရုတ်ဘက်ကို လိုက်ကယ်
တရုတ်ဇနီးမယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရမယ့် မိန်းကလေးငယ် ၇...
30 พ.ย. 2562 - 22:43 น.
တရုတ် ဇနီးမယားအဖြစ် ရောင်းစားဖို့ လူပွဲစားတွေ ခေါ်သွားတဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီးငယ် ၇ ဦး ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ကို ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့ရောင်းစား မခံရခင်မှာ မြန်မာ - တရုတ် ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေက လိုက်လံ ကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံက သိရပါတယ်။
ရောင်းစားခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ၇ ဦးထဲက ၅ ဦးဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကဖြစ်ပြီး ကျန် ၂ဦး ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်က ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ အသက် ၁၈ ကနေ ၂၀ ဝန်းကျင်အတွင်းရှိတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့က ဟိုတယ်တစ်ခုကို လူပွဲစားတွေ ခေါ်သွားတဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေကို နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက် ညပိုင်းက မြန်မာ - တရုတ် ပူးပေါင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ညတွင်းချင်း သွားရောက် ကယ်ထုတ်ခဲ့တာလို့ မူဆယ်မြို့ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးက ပြောပါတယ်။
အခုလို ကယ်နိုင်ခဲ့တာဟာ အဝေးရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အကူအညီပေးနေတဲ့ မြန်မာ ပရဟိတ အဖွဲ့ရဲ့ သတင်းပေးမှုကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ရွှေလီမြို့က ဟိုတယ် တခုမှာ အမျိုးသမီးတွေကို စုထားတယ်လို့ ဖုန်းသတင်းပေး အကြောင်းကြားလာတာနဲ့ တပြိုင်နက် ညတွင်းချင်း သွားဖို့ မလွယ်ပေမယ့် ဒါက အရေးကြီး ကိစ္စ ဖြစ်နေတာကြောင့် တရုတ်ဘက်က လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ရုံးကို သွားပြီး သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်း ကယ်တင်ခဲ့တာလို့ အမှတ် ၁၇ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ရုံး ရဲမှူးကျော်ညွန့်က ပြောပါတယ်။
အဲဒီမှာ ရွှေရှင်းကုန်းရိ ဟိုတယ် ကို ဝင်ရှာတဲ့အခါ အမျိုးသမီး ၉ ဦး၊ အမျိုးသား ၁ ဦးကို တွေ့ရတယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို သွားရောက် ကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရဲမှူးကျော်ညွန့်က ပြောပါတယ်။
အဲဒါကို စိစစ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ တရားခံက အမျိုးသား တစ်ဦး၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ကျန်သူတွေကတော့ လူကုန်ကူးခံရသူတွေလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ တရုတ်နိုင်ငံကို တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဇနီးမယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေဟာ မကြာခဏ ဆိုသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
လူကုန်ကူးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကနေ ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ အသိပညာပေးတာတွေလုပ်ဆောင်နေပေမယ့်လည်း လျော့သွားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။
လူကုန်ကူးခံရသူတွေက ပွဲစားက ပြောတဲ့ တစ်နှစ်ပဲ ပေါင်းရမယ် ၊ ၆လပဲ ပေါင်းရမယ် ဆိုတာတွေကို ယုံကြည်ပြီး ၆လလောက်နဲ့ ပိုက်ဆံ အများကြီးရမှာကို စိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ ရဲမှူး ကျော်ညွန့်က ပြောပါတယ်။
လူကုန်ကူးခံရသူ တချို့ဟာ သိလျက်နဲ့ လာသလို ရခိုင်ဘက်က လာတာလည်း များတယ်၊ ဒီလို ဖြစ်ရပ်တွေ အခုအခါ ရပ်တန့်သွားတာမျိုး မရှိဘဲ ဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ ရဲမှူးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်မယားအဖြစ် လူကုန်ကူးခံရသူ မီးမဖွားခင် ကယ်တင်ဖို့လိုအပ်
ပြည့်တန်ဆာခေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်သူ တရုတ် ၅ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီး
ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် လူကုန်ကူးခံရသူတချို့ဟာ လူပွဲစားတွေပြောတဲ့ တစ်နှစ်နဲ့ ငွေကျပ် သိန်း ၅၀ နီးပါး ရမယ်ဆိုတဲ့မက်လုံးကို ယုံကြည်ပြီး တရုတ်ဇနီးမယားအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ သိသိနဲ့ လိုက်လာသူတွေလည်း ပါတယ်လို့ ရဲမှူးကျော်ညွန့်က ပြောပါတယ်။
ဒီနှစ်အတွင်းမှာ မူဆယ်မြို့ကတဆင့် တရုတ်နိုင်ငံကိုလူကုန်ကူးတဲ့အမှုပေါင်း ၃၉မှုကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးသူပွဲစား အမျိုးသား ၃၁ ဦးနဲ့ အမျိုးသမီး ၁၀၅ဦးကို အရေးယူနိုင်ခဲ့သလို လူကုန်ကူးခံရသူ ၆၁ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ တရုတ်ဇနီးမယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရမယ့် မိန်းကလေးငယ် ၇ ယောက်ကို တရုတ်ဘက်ကို လိုက်ကယ်